टिभीमा युट्यूब विज्ञापनहरू कसरी अक्षम गर्ने TeraNews.net
लेखक आर्टेम प्रकाशित गरिएको छ 07.12.2018
त्यहाँ १ ready-१०-२०२० को लागि उत्तम रेडिमेड समाधान छ: स्मार्टट्यूब अर्को - अधिक जानकारी!
सबैले पैसा मन पराउँछन्, र युट्यूब च्यानल को निर्माता अपवाद छैन। भिडियो इम्बेडेड विज्ञापनहरूमा किन पैसा कमाउने? कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूको प्रयोगकर्ताहरूको लागि, विकासकर्ताहरूले एक अद्भुत AdBlock अनुप्रयोग सिर्जना गरेका छन्। तर त्यहाँ एन्ड्रोइड मा युट्यूब सेवा को लागी कुनै नि: शुल्क कार्यक्रम छैन। सबै पछि, निर्णयहरू जसले यूट्यूबमा विज्ञापनहरू बन्द गर्दछ, तर आफैंमा केही विज्ञापन गर्दछ, सही भन्न सकिदैन। एक टिभीमा यूट्यूबमा विज्ञापन अक्षम कसरी गर्ने स्मार्ट टीवी संग निर्मित टीवी को मालिकहरु को लागी एक जरुरी मुद्दा हो।
इच्छा, रिमोट कन्ट्रोल र धैर्य प्रयोग गर्ने क्षमता एक प्रयोगकर्ताको लागि आवश्यकताहरूको सेट हो जसले YouTube मा विज्ञापन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दछ। तथ्य यो छ कि TV मा गरिएको सेटिंग्स तुरून्त लागू हुँदैन। "मेमोरी" बाट, टिभीले पुरानो डेटा तान्न र YouTube मा भिडियो अवलोकन मोडमा 1-4 घण्टाको लागि अवरुद्ध विज्ञापनहरू देखाउन सक्छ।
टिभीमा युट्यूब विज्ञापन कसरी बन्द गर्ने
रिमोट कन्ट्रोलमा, कुनै पनि टिभी मोडमा, "सेटिंग्स" / "सेटिंग्स" बटन थिच्नुहोस्। खोल्ने नियन्त्रण पट्टीमा, कार्यहरूको निम्न एल्गोरिथ्म प्रदर्शन गर्नुहोस्:
ट्याब "सामान्य सेटिंग्स" खोज्नुहोस् र यसमा जानुहोस्।
"नेटवर्क" मेनू फेला पार्नुहोस् र यसमा जानुहोस्।
"नेटवर्क स्थिति" चयन गर्नुहोस्।
इन्टरनेट कनेक्शन प्रमाणित नभएसम्म कुर्नुहोस् र "आईपी सेटिंग्स" मेनू चयन गर्नुहोस्।
कर्सरलाई "DNS सेटिंग्स" ट्याबमा राख्नुहोस् र चेकबक्सलाई "स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नुहोस्" बाट "म्यानुअली प्रविष्ट गर्नुहोस्" मा परिवर्तन गर्नुहोस्।
"DNS सर्भर" फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तल देखा पर्दछ र IP ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्: 176.103.130.130 विन्डोमा खुल्छ।
"ठीक छ" बटन थिच्नुहोस्, र "फिर्ता" बटन प्रयोग गरेर नियन्त्रण प्यानेल छोड्नुहोस्।
टिभीमा यूट्यूब विज्ञापन कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि, यसको फाइदा र बेफाइदाका लागि अघि बढौं। प्रयोगकर्ता कार्यहरू टिभीमा एडगार्ड सर्भर ठेगाना लेख्छन्। त्यो हो, भिडियो सिधा जानु हुँदैन, तर तेस्रो-पार्टी कम्पनीको सर्भरबाट। Adguard केवल विज्ञापन ब्लक। फाइदा स्पष्ट छ - अनावश्यक भिडियो विज्ञापनहरूमा कुनै अवरोध छैन।
यस सेटि ofको नकारात्मक पक्षले प्रयोगकर्तालाई सम्झौता गर्दैछ। YouTube च्यानलमा प्राधिकरणले ईन्क्रिप्टेड फारममा कसैको सर्भर मार्फत पासवर्ड प्रसारित गर्दछ। एडगार्ड कम्पनीले प्रयोगकर्ताको चासो देख्दछ र आफ्नै तथ्या .्क राख्दछ। यहाँ प्रयोगकर्ताले निर्णय लिनु पर्दछ कि कुन महत्त्वपूर्ण छ - सुरक्षा वा YouTube मा भिडियो हेर्न सहज।
PS १-17-१०-२०२० त्यहाँ उत्तम तयार समाधान छ: स्मार्टट्यूब अर्को - अधिक जानकारी!
व्हाट्सएप मेसेन्जर फेसबुक जानकारी लीक?
मर्सिडीज ग्यारेजमा नयाँ पीढी स्प्रिन्टर
वर्षको अन्त्य सम्म Bitcoin पूर्वानुमान
Apple3एप्पल वाच श्रृंखला Series
HUAWEI nova 5T: समीक्षा, एन्टुटु, विशिष्टताहरू